मुक्तिनाथ विकास बैंकद्धारा ऋण मिनाह « Salyan Today
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्धारा ऋण मिनाह
प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार
सल्यान २३, फागुन ।
मुक्तिनाथ विकास बैंक सल्यान शाखाले एक मृतकको ऋण मिनाह गरेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको साना तथा लघु बैंकिङ्ग डेस्क कार्यालय थारमारेका सदस्य रमेश बुढाथोकीको मोटरसाईकल दुर्घटनामा परि मृत्यू भएकोले तिर्न बाँकी साँवा र व्याज रकम मिनाह बैँकले गरिदिएको हो ।
यस्तै मृतक बुढाथोकीले बैँकलाई दिएको साँवा व्याज तथा काजक्रिया बापतको रकम हस्तान्तरण गरीएको छ । बैंकले तिरीसकेको सावाँ र व्याज बापतको रकम १ लाख ८३ हजार ९६ रुपैयाँ र काजक्रिया बापतको रकम रु. ५ हजार हस्तान्तरण गरेको छ । त्यस्तै उनले तिर्न बाँकी रहेको कर्जा रु. ३ लाख ७७ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ पनि मिनाह गरेको छ ।
उक्त रकम बुढाथोकीकी श्रीमती अस्मीता बटालालाई बागचौर नगरपालिका नगरप्रमुख लोकमान बुढाथोकी र सिद्धकुमाख गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाअध्यक्ष राम बहादुर बस्नेतले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका गर्नुभएको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड थारमारे शाखाका शाखा प्रमुख गेहेन्द्र भट्टराईले बैंकले जनताको सुःख दुःखमा साथ दिदैँ आएको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, साना तथा लघु बैंङ्गिक डेस्क श्रीनगरका डेस्क प्रमुख डिल्ली प्रसाद राणाले गर्नुभएको थियो ।